Egg Tray Machine, Paper Egg Tray Machine, lukathayela ibhokisi Machine - Wanyou
umthamo rotary Iqanda ugqoko umshini
Lolu hlobo Iqanda ugqoko umshini isebenzisa imfucuza yephepha njengoba impahla eluhlaza ukukhiqiza emathileyi amaqanda ngoba inkukhu ipulazi ifektri noma ezinye ikhasimende odinga emathileyi. Kungenza ukuma eziningi elula enkulu ubuningi funa Iqanda emathileyi, apula emathileyi, Iqanda amabhokisi, Iqanda amabhokisi, iwayini emathileyi, izicathulo emathileyi, etc..using imfucuza yephepha njengoba impahla eluhlaza.
BFY Uchungechunge ummese mncane mpo mfana ngokucindezela umaka ukusonga
ummese Izacile mpo mfana ngokucindezela ukusonga umaka kuyalinqoba Burr nasezimweni flaking kubangelwa Imi sokuvalelisa kusukela bendabuko obukhulu engela ummese. Amakhadibhodi sokuvalelisa-usike ine smooth, elikhanyayo, imiphetho ehlanzekile kungekho izimpawu flaking. It sithuthukisa izinga jikelele kanye nokuvela amakhadibhodi ikakhulukazi baveza ukwanda ayisisekelo kuya ezingemuva izinga ithrekhi zokunyathelisa.
Waste Paper Egg Tray Ukwenza Machine, Small Egg Tray Machine , Egg Tray Ukwenza Machine, Uhlobo rotary Paper Egg Tray Machine,